မာဃလုလင်: တန်ဖိုး ကျပ် ၂သိန်းအောက် GSM ဖုန်းများ မတ်လ ၅ ရက်နေ့တွင် စတင်ရောင်းချမည်
သတင်းအချက်အလက် ကဗျာ ရသဆောင်းပါး လိုအပ်သမျှ ရစေနိုင်စေသော နေရာ
မတ်လ၅ရက်နေ့မှစတင်ကာတန်ဖိုးနည်းGSMဖုန်းများကို ရောင်းချပေးသွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (MPT) မှ သိရသည်။
“လာမယ့် မတ်လ ၅ ရက်နေ့ကစပြီး စတင်ချပေးသွားမှာပါ။ အရေအတွက် ကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအတိအကျမပြောနိုင်သေးပါဘူး”ဟု မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (MPT)မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
အဆိုပါဖုန်းများအားကျပ်ငွေတစ်သိန်းရှစ်သောင်းဖြင့် ရောင်းချပေးသွားမည်ဟု သိရသည်။ ထို့ပြင် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးသို့ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချ ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဦးစွာ နေပြည်တော်နှင့် ရန်ကုန်တို့တွင် ၅ ရက်နေ့မှ စတင်ကာရောင်းချပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
တန်ဖိုးနည်းဖုန်းများကိုOne stopservice ဖြင့်ရောင်းချပေး သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် တစ်ဆင့်ပြန်လည် ရောင်းချလိုသော ဆိုင်များအနေဖြင့် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ထားသော ပုဂ္ဂလိကကုမ္မဏီ ၂၃ ခုတွင် ချိန်ဆက်ဝယ်ယူနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
“သုံးသိန်းတန်းဖုန်းတွေကို ပြည်သူအများစုက မျှော်နေကြတာကြာပါပြီ။ အခုလို နှစ်သိန်းဝန်းကျင်နဲ့ ချပေးမယ်ဆိုတော့လည်း ဝမ်းသာရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခြားပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီတစ်ခု ကျပ် ၅ ထောင်တည်းနဲ့ ရောင်းချပေးမယ်ဆိုတော့ ပြည်သူတွေမှာ ဇဝေဇဝါနဲ့ ဝယ်ရမလို၊မဝယ်ဘဲထပ်စောင့်ရမလိုဖြစ်နေကြပါတယ်”ဟု အသေးစားစက်မှုလုပ်ငန်း ပိုင်ရှင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးသိန်းထိုက်က ပြောသည်။
အဆိုပါ ဂျီအက်စ်အမ်ဖုန်းများ၏ နံပါတ်ကို၀၉-၄၂နံပါတ်မျာဖြင့်ရောင်းချပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ထို့ပြင် ဖုန်းများကို စတင်ရောင်းချပေးသည့်အချိန်မှ ခြောက်လအတွင်း MMS (Multiamedia Serfvice) စနစ်ကိုအသုံးပြုနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
GSM ဖုန်းပြောဆိုခမှာ ယခင်နှုန်းထား အတိုင်း တစ်မိနစ် ကျပ် ၅၀ နှုန်း ဖြစ်ပြီး အင်တာနက် ချိတ်ဆက်နိုင်မည့် ဧရိယာအတွင်း အဆိုပါ GSM ဖုန်းနှင့် တွဲဖက်၍ အင်တာနက် ဝင်ဆောင်မှု ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အင်တာနက် အသုံးပြုရန်အတွက် ထပ်မံ လျှောက်ထားပါက ကျပ် ၁၀၀၀၀ ကျသင့်မည်ဖြစ်ပြီး အသုံးပြုခမှာ တစ်မိနစ်လျှင် လေးကျပ်နှုန်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
တင်ဆက်သူ မာဃလုလင် at Friday, March 02, 2012
မျှားနတ်ရှင် April 11, 2012 at 5:45 AM
မင်္ဂလာပါအကို နှစ်သိန်းဖံုး ကို အခု ကွိန်တော် ၀ယ် တာ နှစ်သိန်းသံုး သောင်းပေးရပါတယ်။ စုံစမ်းကြည့်တော့ဆိုင်အတော် များများ အဲ့အတိုင်းပဲ ခင်ဗျ ။
Divorce Attorney August 28, 2016 at 5:18 AM
Advantages of EmployingaDivorce Attorney Hiringaproperly respected, neighborhood, skilled, honest attorney for the divorce may have several advantages. When you employadivorce lawyer, you will get an endorse as well as number one ally in the procedure for divorce. A new divorce attorney will likely see the legalities and also alternate options you might have possess during the divorce. An attorney could advise along with signify your client that they have legal rights to be able to.
It is obvious that this legal rep will have your best interest, yet she or he will not likely create illogical choices determined by inner thoughts. They're going to instead base choices after good pay out and legal techniques. Ifaperson is certainly going by way ofadivorce using kids, these types of thoughts are even greater, obtaining one other reason to hireahousehold law expert. 4. Efficient- If an individual is trying to complete their very own divorce, it may needagreat deal of research, effort and time to comprehend the particular legal declaring process, terminology and procedures.
Kyaw Kyawzaw Hlaing
ထူးထူးခြားခြား ဓါတ်ပုံများ (2)
သတင်း နှင့် ဆောင်းပါး (7)
သုတ အဖြာဖြာ (1)
ဟောပြောပွဲ နှင့် မှတ်စရာ (3)
အသွင်မတူ တဲ့ အိမ်သူ
" အသွင်မတူ တဲ့ အိမ်သူ " ကျနော်က ပလေတိုကို သိတယ် လင်ကွန်း ကို သဘောကျတယ် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို အားကျတယ် အိုဘားမားကို လေးစားတယ် ...
မောင်းမ လက်သုံးပုံ ( သီပေါမင်း ၏ ကိုယ်လုပ်တော် စာရင်း) သီပေါမင်း-စုဖုရားလတ်နှင့်စုဖုရားလေး ဟိုတလောလေးက သတင်းကြီ...
တန်ဖိုး ကျပ် ၂သိန်းအောက် GSM ဖုန်းများ မတ်လ ၅ ရက်နေ့တွင် စတင်ရောင်းချမည် မတ်လ၅ရက်နေ့မှစတင်ကာတန်ဖိုးနည်းGSMဖုန်းများကို ရောင်းချပေးသ...
ဒီဓာတ်ပုံဟာ ဟားဗတ်တက္ကသိုလ် စာကြည့်တိုက်ရဲ့ နံနက် ၄ နာရီ ပါ။ တော်တော်လေးကောင်းလို့ ဘာသာပြန်ပေး လိုက်တာပါ။ အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သူတွေရဲ့ ...
အခုတလော ထောက်လှမ်းရေးဖခင်ကြီး ဦးခင်ညွန့်အကြောင်း သတင်းတွေ တော်တော်ဖတ်ရတော့ ဘ၀တစ်ကွေ့မှာထောက်လှမ်းရေးတွေနဲ့  လက်ပွန်းတတီး နေလာခဲ့ရချိ...
ရန်ကုန်ဟိုတယ်တွေနဲ့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးတွေရဲ့ ဒုက္ခ By featured, ဧရာဝတီ on February 11, 2012 11:00 am in ဆောင်းပါး / 1 comment, Hits: 5,018 ...
ဆုတဆယ့်ငါးပါးရသော တကာမကြီး(ဟာသလေးနော်) ဗန်းမော်မြို့သို့ ရောက်လေလျှင် နေပြည်တော်မှ ပညာတတ်ထေရ်အကျော် ဆရာတော်တပါးဖြစ်၍ ကိုးကွယ်သည့်သူ အလွန်...
PM: အရင်က မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘလော့စပေါ့တွေပိတ်ထားတော့ သိပ်အဆင်မပြေပါဘူး။ အခု ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်လို့ မိမိနှစ်သက်တဲ့ စာလေးတွေကို ဆိုဒ်တစ်ခု...
"နာရေးယာဉ်မောင်း" *လိုအပ်ရင်ကူညီပြီး မျက်နှာ ဟန်အမူအရာမှာတော့ ဘာကာလာမှ စွက်မထား ဒီလိုပဲ ဒီလိုလေးပဲ လုပ်စရာရှိတာတွေကို လုပ်သ...
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်တဲ့ အချိန်သံသရာတစ်ပါတ်မှာ သူထပ်ရောက်လာပြန်ပြီ . . . မနှင်းဆီရေ တချိန်က မင်းအပြုံးကို မြင်ယောင်လား မြင်ယောင်...
တန်ဖိုး ကျပ် ၂သိန်းအောက် GSM ဖုန်းများ မတ်လ ၅ ရက်ေ...
မာဃလုလင် demonprince13@gmail.com http://facebook.com/kyaw.kyawzawhlaing
ဘလောဂ့်နာမည်လေးထည့်ပြီးမှ ရှယ်ပါ ။. Awesome Inc. theme. Powered by Blogger.